खुल्लापन पैदा गर्ने मौलिकता ? रब्बी माइकल अब्राहम
खुल्लापन पैदा गर्ने कट्टरवाद ?
प्रतिक्रिया > श्रेणी: दर्शन > खुल्लापन पैदा गर्ने कट्टरवाद ?
जोसेफोन ३ वर्षअघि सोधेको थियो
मलाई थाहा छैन यदि रब्बीले हालैका वर्षहरूमा बालले टेशुवाको अनौपचारिक समुदायमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा सुनेको छ, त्यसैले म धेरै वर्षहरूमा स्पष्ट गर्नेछु यदि अधिकांश बालेई टेशुवाहरूले अल्ट्रा-अर्थोडक्स जीवनशैलीको परित्यागको रूपमा र। नयाँ धर्मान्तरितहरू पनि धेरैजसो यसमा प्रवेश गर्दैनन्। (म आफैं अति-अर्थोडक्सको अवहेलना गर्ने तेशुवाहहरूको छोरा हुँ) आज धेरै नै आधुनिक अर्थोडक्स यसको सबै विशेषताहरूमा देखिन्छ तर तिनीहरूको विचारधारालाई हेर्दा एक स्पष्ट कट्टरवाद देख्न सकिन्छ। हलखाह र थपमा सरलतावादी रेखालाई पछ्याउने सरल लोकविश्वास र म एक घटनाको बारेमा आश्चर्यचकित छु कि विरोधाभासी कट्टरपन्थीहरूले यस्तो विविध र खुला समुदाय सिर्जना गरेका छन्, म भन्न चाहन्छु कि यो बाथ पार्टीको लिंगविहीन प्रकृतिको कारण हो। अति-अर्थोडक्स संसारले अनुभव गरेको आघात। वैसे, मैले भेटेका धेरै बाथिस्ट सदस्यहरू सबै हिसाबले धार्मिक-आधुनिक छन्।
के रब्बीले घटनाको व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ?
प्रश्न ट्यागहरू: ט
तपाईंको विवरण चाखलाग्दो छ, यद्यपि मलाई थाहा छैन यसले कति प्रतिनिधित्व गर्दछ (के यो वास्तवमै "अधिकांश उत्तर धारकहरू" हो)।
यहाँ दुई व्याख्यात्मक तथ्यहरू छन्: 1. तिनीहरू आधुनिक हुँदैछन्। 2. कि तिनीहरूले हलाखाह र विश्वासको कट्टरपन्थी व्याख्या कायम राख्छन्।
म तपाईंका सेटिङहरू बारे निश्चित छैन। आधुनिक अर्थोडक्सी सामान्यतया थप लचिलो हलाखिक व्याख्यासँग सम्बन्धित छ। परिभाषा अनुसार, यो तपाइँको जीविकोपार्जन को लागी केहि मा एक पेशा, वा कविता र साहित्य को पढ्न को लागी, वा कला मा एक पेशा जस्तो देखिन्छ। मलाई स्पष्ट छैन।
यसको लागि धेरै कारणहरू हुन सक्छन्: अर्को संसार जान्न (तिनीहरूको अगाडि एक विकल्प छ)। अति कट्टरवादबाट थकित (एकातिर अभिभावकीय कदमप्रति प्रतिक्रिया, अर्कोतिर विद्रोहको नक्कल)। त्यहाँ पक्कै पनि मनोवैज्ञानिक कारणहरू छन् (आघातहरू। तिनीहरू अल्ट्रा-अर्थोडक्स परम्परामा जरा गाडेका छैनन्। तिनीहरूका अभिभावकहरू पनि खोज्ने प्रकारका छन्)।
एकै समयमा तिनीहरूसँग कुनै अन्य धार्मिक मोडेल छैन किनभने तिनीहरू धर्मनिरपेक्षता वा अति-अर्थोडक्सिज्मलाई मान्यता दिन्छन्। हुनसक्छ त्यसैले हलाखाहको उनीहरूको अवधारणा अति-अर्थोडक्स हो।
यी सबै व्याख्याहरू सम्भव छन्, तर घटना अधिक व्यवस्थित परीक्षाको लायक छ।
गिदोन ५ वर्षअघि जवाफ दिए
सामान्यतया जवाफको दोहोरिने बौद्धिक कारणले हुँदैन, (हो, मैले "मान" र "संवाद" मा विश्वस्त "प्राध्यापकहरू" को बारेमा सुनेको थिएँ) त्यसैले तिनीहरूको दिमाग प्रयोग गर्दा फेरि प्रश्न दोहोरिनेछ।
यो घोर सामान्यीकरण हो। एक व्यक्तिको लगभग हरेक चरणमा धेरै विमानहरू, मनोवैज्ञानिक र दार्शनिक हुन्छन्। तर उत्तरमा र प्रश्नमा बाहिर निस्कने दुवैमा दुवै अवस्थित छन्।
र अब उहाँ जेजी हुन जाँदै हुनुहुन्छ मा चुनावको जवाफ दिनुहोस्
Beit Yosef Lehava मा Lehavah एक जातिवादी संगठन हो? (स्तम्भ ४८४)
टिर्गिट्स मा ऋषिहरु द्वारा प्रवचन को जवाफ - बियर Hagola
तुलनात्मक रूपमा तर्कसंगत मा Lehavah एक जातिवादी संगठन हो? (स्तम्भ ४८४)
सुखदता मा चुनावको जवाफ दिनुहोस्